गुगल खोजी कन्सोलले मलाई लग्यो। | Martech Zone
आइतबार, अक्टोबर 26, 2014 बिहीबार, मार्च ० 25, २०२० Douglas Karr
हामी आउँदै गरेको डिजाइन परिवर्तनको लागि मार्टेकलाई दिनरात तैयार गर्दैछौं। कार्यले ,4,000,००० ब्लग पोष्टहरू पछाडि फर्केर सामेल गरेको छ - यो सुनिश्चित गर्दै कि हामीले चित्रहरू चित्रित गरेका छौं, सामग्रीको मिति सकिएको छैन (जस्तै प्लेटफर्म जुन व्यवसायबाट बाहिर आएको छ), र यो सुनिश्चित गर्दै कि हामीसँग अन्य अनौंठो समस्याहरू छैनन्… लगभग १०० पोष्टहरू जस्ता। त्यो हो कि मैले कोड स्निपेट्सका लागि html एन्कोडि। गडबड गर्नुभयो, र अधिक। हामीले एउटा ब्याकलि audit्क अडिट पनि गर्‍यौं र एक टन् क्रिप्पी स्प्याम साइटहरू अस्विकार गर्‍यौं जुन हामी दर्सा गर्दै थियौं।
एउटा थप बृद्धि यो थियो कि हामीले एक स्थापना गर्यौं एसएसएल प्रमाणपत्र केहि लीड जेनरेशन र इकमर्स विकल्पहरूको लागि तयारीमा हामी साइटमा थप्नेछौं। उल्लेख नगर्नु जुन गुगलले स site्केत गर्यो कि सुरक्षित साइटले भविष्यमा स्तर निर्धारणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। मैले गरेका परिवर्तनहरूले पक्कै प्रभाव पारेको छ। वास्तवमा, पछिल्लो महिनामा हाम्रो खोज इञ्जिन ट्राफिक दोब्बर भयो। यहाँबाट एक स्क्रीनशट छ Semrush:
हामी इमान्दारीसाथ मार्टेकमा यस रूपमा काम गर्न धेरै समय पाउँदैनौं किनकि हामी हाम्रा ग्राहकहरूको सबै साइटहरू अनुकूलित छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न काम गर्दैछौं। हाम्रो प्रक्रियाको एक हिस्साको रूपमा, म साइटहरू स्क्र्याप गर्नका लागि धेरै उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको छु समस्याहरूको खोजीमा, र मैले केही अनौंठो मुद्दाहरूलाई सच्याएको छु। गुगल खोज कन्सोल प्रकट भएको छ ... नक्कल शीर्षक, आदि।
त्यसैले ... मेरो प्रतिक्रिया कल्पना गर्नुहोस् जब म भित्र लग ईन गर्छु गुगल खोज कन्सोल यो हप्ता र यो देखे:
मैले वेबमास्टरहरूमा त्रुटिहरूको लागि जाँच गरें र त्रुटिहरू तल उल्लेखनीय थिए। मैले जाँच गरी र मेरो पुन: जाँच गरियो CMS SEO चेकलिस्ट - robots.txt फाईल, मेरो साइटम्याप, मेरो रिडिरेक्टहरू ... सबैकुरा! मैले कुनै सन्देशहरू जाँच गरें (उदाहरण: दण्ड) र मलाई कुनै सन्देश पठाइएको छैन। जे होस् मँ फ्रिक आउट छु, म सहयोग गर्न सक्दिन तर हैन कि वेबमास्टर्समा केहि गलत भयो भने।
र त्यसपछि यो म कहाँ आयो ... के भने गुगल खोजी कन्सोल लाई सुरक्षित मार्ग आवश्यक छ साइटमा? त्यसैले मैले दर्ता गरें https: //martech.zone सट्टामा http://martech.zone। मैले वास्तवमै हेडर ट्याग परिवर्तन गर्नुपर्दैन। यहाँ के खपिएको छः
गुगल ... तपाईले मेरो भित्रबाट बकवास निस्किनुभयो। मैले सोचें कि मैले आफ्नो साइटमा केहि नराम्रो काम गरेको छु कि म खोज पूरै रोकिरहेको छु। Whew!
टैग: गुगल वेबमास्टरहरूगुगल वेबमास्टर्स उपकरणहरूhttp एसईओhttps एसईओhttps वेबमास्टरहरूएसईओ गैर एसएसएलएसईओ एसएसएलssl बनाम गैर- ssl एसईओएसएसएल वेबमास्टरहरूवेबमास्टर उपकरणहरूवेबमास्टर्सवेबमास्टर्स httpsवेबमास्टरहरू एसएसएल
चिटर: ग्राहकहरूलाई सामाजिक साझेदारी ब्रान्ड एम्बेसेडरहरूमा परिणत गर्नुहोस्!